"Bukela isandi noMark Ronson" i-Apple TV + docuseries kwitekhnoloji yomculo | Ndisuka mac
UManuel Alonso | | Apple TV, Ezahlukeneyo
Siyaqhubeka ne-Apple TV + docuseries. Asizukukwazi ukonwabela ubomi benye yee-greats ezinje ngoLouis Armstrong. Singakonwabela nolunye kuthotho olunokutsala owona mdla mkhulu ngokunxulumene nomculo. Imalunga ne "Bukela isandi kunye noMark Ronson" kwaye ekujongwe ukuba kufundiswe umbukeli ukuba isetyenziswa njani itekhnoloji emculweni.
Okulandelayo 30 de julio de 2021 Kwi-Apple TV +, siza kuba nenkulumbuso yehlabathi "Bukela isandi noMark Ronson." Le docuseries intsha iza kuvavanya itekhnoloji entsha esetyenziswayo emculweni kunye noPaul McCartney, uKestlove, uKing Princess, uDave Grohl, uAd-Rock kunye noMike D weBeastie Boys, uCharli XCX nabanye abaninzi.
Olu xwebhu lutsha izakuba nezahluko ezithandathu kwaye ujonge ukwenziwa kwesandi kunye netekhnoloji yotshintsho eyenze umculo njengoko sisazi. Ukusuka kumvelisi ophumelele u-Oscar uMorgan Neville (iinyawo ezingama-20 ezivela eStardom) kwaye wabanjwa nguMark Ronson, owaziwa kwilizwe liphela, iGolden Globe kunye no-DJ ophumelele iGrammy izihlandlo ezisixhenxe, "Bukela Isandi noMark Ronson" wakhululwa kuphela. Ngobhaliso lwe-Apple TV +.
Isiqendu ngasinye sombhalo siya kulandela uRonson njengoko efumanisa ifayile ye- Amabali angachazwanga emva kokudalwa komculo kwaye ubude babavelisi kunye nabadali bakulungele ukugqitha ukuze bafumane isandi esifanelekileyo. Umculo kunye nobugcisa bujongwa kunye netekhnoloji ngeencoko ezingathandabuzekiyo kunye namabali omculo afana nala achazwe apha ngasentla.
Ekupheleni kwesiqendu ngasinye, uRonson uyakwenza kwaye akhulule isiqwenga somculo esahlukileyo sisebenzisa itekhnoloji kunye neendlela zobuchule kubandakanya isenzi, i-synthesizer, i-auto-tune, iigubu, isampulu kunye nokugqwetha. Ukunethezeka kweendlebe namehlo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » "Bukela isandi noMark Ronson" i-Apple TV + docuseries kwitekhnoloji yomculo
Guqula amaphepha ewebhu eSafari nakwiMacOS Catalina